China Acoustic Partitions fanamboarana sy orinasa | Hongshida
1. tabilao fanamafisam-peo dia fomba fanaingoana maoderina. Afaka manasaraka ny habaka haingana sy mora. Ary manana insulation feo sy insulation hafanana ary fiasan'ny afo;
2. Ny Partitions Acoustique Ny birao dia vita amin'ny s / s misy hakitroka avo lenta, fingotra vita manokana, landy vita insulement tsara feo ary tabilao vita sns sns ny tabilao vita dia fisaka sy mafy;
3. Ny takelaka famaranana dia ampidirina amin'ny lalan'ny aliminioma, tafangona amin'ny kodiarana maro lalana; ny tabilao dia azo tehirizina amin'ny fomba maro samihafa;
4. Tsy mila lalana amin'ny tany ilay izy, fa ny valindrihana ihany no ahantontsika amin'ny valindrihana, ary mety ho eo amin'ny fiaramanidina mitovy amin'ny haingon-trano valindrihana ihany. Tsy hisy fiatraikany amin'ny fomba haingo manontolo;
5. Manodidina ny solaitrabe dia misy fingotra insulated feo, afaka manampy amin'ny insulate ny feo miditra;
6. Ny fomba fandidiana dia mora kokoa, tsara kokoa noho ny fomba taloha izay nampiasaina tamin'ny lohataona teo aloha;
7. Afaka manampy varavarana tokana na avo roa heny amin'ny solaitrabe isika mba hahamora kokoa;
8. Manana famaranana maro isan-karazany izahay mba hihaona amin'ny takiana samihafa amin'ny mpanjifa ary hahazo vokany haingo samy hafa.
Mamokatra karazana vokatra akustika sy partition akustika maro izahay. Ny orinasanay dia manarona faritra mihoatra ny 10000 metatra toradroa ary nandalo ny ISO9001: 2008 International Quality Certificate, GRS Certificate. Anisan'izany ny tatitra momba ny fanandramana matihanina: ny tatitra momba ny fitsapana nasionaly momba ny afo, ny tatitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana, ny tatitra momba ny fitsapana ny fanamafisam-peo, sns.
Manana andiana milina mifehy solosaina mandeha ho azy sy mpiasa teknika matihanina izahay hiantohana ny vokatra avo lenta. Ny fivoahan'ny vokatra akustika dia mihoatra ny 400000 metatra toradroa isan-taona ary ny fivoahan'ny rafitra fisarahana mihetsika dia mihoatra ny 40000 metatra toradroa isan-taona. Mihoatra ny 35% ny vokatray no aondrana any amin'ny mpanjifa manerantany. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa hamoronana fiaraha-miasa maharitra.
Teo aloha: Panel Wall akustika
Fisarahana fizarana akustika
Rindrina fizarazarana akustika
Fisarahana fitaratra akustika
Partitions Office Acoustique
Panel fampisarahana akustika
Mpizara fizarana efitrano akustika
Fampisarahana an-tsokosoko mihetsiketsika